တရုတ် အီလက်ထရွန်းနစ် လက်ဗွေရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စမတ်သော့တံခါး ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
လျှော့စျေး Electronic Finger ကိုဝယ်ပါ။Digital Smart Lock Door Quotation ကို print ထုတ်ပါ။
Electronic Fingerprint Digital Smart Lock Door မိတ်ဆက်
အီလက်ထရွန်းနစ်လက်ဗွေရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စမတ်သော့တံခါးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်သော အလူမီနီယံစမတ်တံခါးသော့ခတ်မှုဖြစ်သည်။ ဘောင်အကျယ်သည် 38 မီလီမီတာသာရှိသော နောက်ဆုံးပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကို ကျင့်သုံးပြီး ဘောင်ဘောင် 46 မီလီမီတာထက်ပိုသော မည်သည့်အလူမီနီယမ်တံခါးများအတွက်မဆို သင့်လျော်သည်။ ဤသော့ခလောက်ကို သစ်သားနှင့် လုံခြုံရေးတံခါးများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး mortise အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
အဆင့်မြင့် APP စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်၊ WiFi သို့မဟုတ် BLE မှတစ်ဆင့် သင့်စမတ်ဖုန်းသို့ စမတ်သော့ကို ချိတ်ဆက်ကာ သင်၏စမတ်တံခါးသော့ကို နေရာမရွေး အချိန်မရွေး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ စမတ်ဓာတ်လှေကား လာပါပြီ။
Electronic Fingerprint Digital Smart Lock Door အတွက် ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက်
1. လော့ခ်ဖွင့်ရန် နည်းလမ်း6ခု- WiFi APP အသုံးပြုခွင့်၊ BLE APP အသုံးပြုခွင့်၊ လက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်း၊ ကတ်သော့ဖွင့်ခြင်း၊ PIN ကုဒ်သော့ဖွင့်ခြင်း၊ စက်ခလုတ်သော့ဖွင့်ခြင်း။
9. ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားပါက အရေးပေါ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ခြင်း၊
10. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုကို OEM/ODM၊
hot Tags:: အီလက်ထရွန်းနစ် လက်ဗွေရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စမတ်သော့တံခါး၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်